Salaamanews » Warbixin iyo muuqaal: Raafka Kenya iyo Soomaalida oo bilowday in ay dib ugu noqdaan dalkooda
Home » Warar Warbixin iyo muuqaal: Raafka Kenya iyo Soomaalida oo bilowday in ay dib ugu noqdaan dalkooda Print - Daabace: SalaamaNews - Jan 5th, 2013 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Daawo ama akhri warbixin ku saabsan dhacdooyinkii Soomaaliya sanadkii tagay ee 2012-kii Sonkorta Soomaaliya laga soo dhoofiyo ayaa maalgalinaysa al-Shabaab, madaxda Kenya ayaa sidaas lehAmaanka oo soo laabtay, dib u dhiska billowday iyo isdhexgalka bulshada ayaa tusaaleeyay nabadda Muqdisho (warbixin, falaanqeyn iyo muuqaal)Maxaa isbadalay Sanad kadib soo galitaanka Kenyan (Xog)Iyaga oo dhibaato kala kulmaya Kenya, ayay qaxootigu Soomaaliya ku noqonayaan
Amarka Kenya ayaa waxaa ka gadooday Soomaali badan oo durba dalka Soomaaliya ku noqday, waxaana carada ka dhalatay hadalka Kenya ay keentay in Soomaalidu ay maal gashigoodii si tartiib ah u hakiyaan.
Siyaasiyiinta dalkaan Kenya ayaa isku khilaafay sida laga yeeli karo Soomaalida la shaqeysa Al-shabaab iyo kuwa caadiga ah ee howlaha shaqa u yimid dalkani, waxaase carada ugu badan muujiyay Soomaalida ka soo jeeda gobolka waqooyi bari.
Sidoo kale siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka waqooyi bari ee ka tirsan dowladda ayaa Sabtida maanta ah kulan ay ku yeesheen magaalada Nairobi, waxay kaga doodeen dhibaatooyinka lagu hayo shacabka Soomaalida ee lagu raafayo xaafadda Islii iyo magaalooyinka kale ee dalka Kenya.
Wasiirka gaashaandhiga dalka Kenya Yuusuf Xaaji, oo ah mas’uul laga soo doortay gobolka waqooyi bari ayaa sheegay inuu xilka ka dagayo hadii aysan madaxda Kenya jawaab adag ka bixin dhibaateynta dadka Soomaaliyeed.
“Waxaan dhageystay doodda dadkii aan shalay la kulmay, waxaana madaxda dalka u sheegayaa inaan xilka ka dagayo hadii aan wax laga qaban oo aan jawaab adag laga bixin dhibaateynta dadka Soomaalida” ayuu yiri Yuusuf Xaaji.
Aadan barre Ducaale, oo ka mid ah siyaasiyiinta Kenya ee ku jira aqalka sare ee dalka ayaa sheegay in dhibaatadu ay ka imaaneyso ciidamada GSU oo shaqa ka dhigtay laaluush ay ka qaadaan dadka Soomaalida ee dhibaatada dalkooda uga soo baxsaday.
“Ciidamada GSU, ayaa noqday caqabadda koowaad ee heysta dadka Soomaalida, waxaana ka dambeysa siyaasad ay dibadda ka wadaan madaxda dalka Kenya qaarkood” ayuu yiri Ducaale.
Safiir Cabdi Nuur tuureey, oo kamid ah xubnaha baarlamaanka, dalka Kenya ayaa isna sheegay in lagama maarmaan ay tahay jawaab adag oo laga bixiyo tacaddiyada loo geystay dadka Soomaaliyeed.
Dhallinyarada Soomaalida ee dalka Kenya, ayaa aaminsan in Kenya ay xad gudub ku tahay dhibaateynta dadka aan waxba galabsan, waxaana masuuliyiinta keenyaatiga lagu eedeeyay inay aqoonsigii karaka diideen.
Axmed Sheekh Cabdulladiif, oo ah arday Soomaaliyeed oo wax ka barta dalka Kenya ayaa idaacadda VOA u sheegay in dhallinyaradu ay heystaan dhibaatooyin badan oo aanay iyagu mas’uul ka aheyn.
“Soomaalida in dhaqaalaha Kenya ay wax ku leedahay laba isma weydiineyso, sida xawaaladihii, lacagaha dadka Soomaalida waxay galayeen jeebabka dadka keenyaanka ah” ayuu yiri Axmed.
Murankan ayaa la sheegayaa inuu salka ku hayo doorashada soo socota ee bisha March ka dhici doonta dalkani Kenya, waxaana la sheegayaa in musharrixiintu ay ka cabsi qabaan codka Soomaalida halka uu raaci doono.
Halkaan hoose ka daawo muuqaalka “video” aan ka soo xiganay BBC-da
Tags: maqaallo, warar « Qoraalkii HoreUrurrada siyaasadda Puntland oo wajahaya shuruudo adag	Qoraalka Xiga »Labada Sudan oo heshiis uu dhexmaray	Halkan Hoose ku Jawaab